अब तेस्रो मुलुकबाट सोझै सामान आउन सक्ने | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← टर्कीमा बन्धक ९ नेपाली हिरासतमा
मधेसमा जन्मिए ३० पार्टी ! भोट कसलाई दिने ? →
अब तेस्रो मुलुकबाट सोझै सामान आउन सक्ने
काठमाडौं – तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आयात गरिने सामान सिधै नेपाली नाकासम्म ल्याउन दिन भारत सहमत भएको छ। दुई मुलुकका भन्सार प्रमुखको गत साता नयाँ दिल्लीमा भएको वार्तामा भारत नेपाललाई यो सुविधा दिन सहमत भएको हो।
‘तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता र हल्दियामा आउने सामानलाई सिधै नेपालको भन्सार नाकासम्म ल्याउने सुविधा भारतले दिएको छ,’ वार्तामा सहभागी भन्सार विभागका महानिर्देशक मुक्तिनारायण पौडेलले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘यो सुविधाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरणमा धेरै सजिलो बनाएको छ।’ पौडेलले भारत अन्तर्राष्ट्रिय नियम र अभ्यासअनुसार नै यो सुविधा दिन सहमत भएको जानकारी दिए।
अहिलेसम्म कुनै पनि व्यापारीले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल सामान ल्याउँदा दुई वटा कम्पनीलाई ढुवानीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था थियो। पहिलो कम्पनीले तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहसम्म मात्र ल्याउन पाउँथे। यी बन्दरगाहमा आएका सामान नेपालसम्म ल्याउन फेरि अर्को कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो। भारतले दिएको यो सहमतिपछि अब एउटै कम्पनीले तेस्रो मुलुकबाट नेपालका भन्सार नाकासम्म ढुवानी गर्न सक्नेछ।
तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा परेको समस्याप्रति नेपाली व्यवसायीले धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए। नेपालले सरकारी तवरबाटै सन् २००५ मा भारतसँग यो सुविधा दिन माग गरेको थियो। तर, भारत सहमत भएको थिएन।
सन् २०१२ मा भारतमा भएको व्यापारिक अधिकारीहरुको वार्तामा पनि यो मुद्दालाई नेपालले जोडदार रुपमा उठाएको थियो। अहिलेको वार्तामा पनि नेपाली पक्षले यो सुविधा’bout मुद्दा उठाएपछि भारत दिन तयार भएको हो।
‘वार्तामा भारतीय पक्षले यो सुविधा आवश्यक पर्ने जायज कारण र व्यापारमा परेका समस्या’bout सोधखोज गरेको थियो,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘हामीले सबै जिज्ञासाको स्पष्ट जवाफ दिएपछि ऊ सहमत भएको हो।’
यो सुविधाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा नेपालले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको एउटा ठूलो समस्या हल भएको छ। यसले सामान आयात गर्दा लाग्ने समय र लागत दुवैलाई केही रुपमा घटाउने छ। अहिले नेपालबाट भारतबाहेक सामान निर्यात गर्दा औसतमा ४१ दिन र आयात गर्दा ३८ दिन लाग्ने गरेको छ। यो सुविधापछि समय पनि केही घट्ने पौडेलले जानकारी दिए।
तेस्रो मुलुकका सामान आयात गर्दा भारतीय बन्दरगाहसम्म आएपछि नेपाली व्यवसायीको समस्या सुरु हुने गरेको थियो। बन्दरगाहसम्म आएका सामान ल्याउन फेरि अर्को कम्पनी खोज्नुपर्ने, सामान जाँचको नाममा भारतीय अधिकारीले दिने दुख, सामान लोड अनलोडमा ढिलो हुँदा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त रकम, सामान हराउनेजस्ता विभिन्न समस्या व्यवसायीले बेहोर्दै आएका थिए।
तर, यो सुविधापछि सिधै एउटै कम्पनीले नेपालसम्म सामान ढुवानी गरिदिने भएकाले व्यवसायीलाई अब यस्ता समस्या आउने छैनन्। सामान ढुवानीको दायित्व एउटै कम्पनीको हुने भएकाले यस्ता सबै जोखिम पनि उसैले लिनुपर्नेछ।
पौडेलले यो सुविधा लिन नेपालले कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको जानकारी दिए। उनले भारतले सहमति दिए पनि कस्तो कार्यविधि बनाउने भन्ने जिम्मेवारी नेपालको हो। ‘कार्यविधि बनाउन सरोकारवाला व्यापारीसँग एक चरणको छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने।
अहिले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने सामानमध्ये करिब ९० प्रतिशत वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमार्फत आउने गरेका छन्। कोलकता र हल्दियाबाट छुटेका सामान यहाँ रेलसेवामार्फत ल्याउने गरिन्छ।
व्यापारीले पनि यो सुविधाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज भएको बताउँछन्। ‘यो सुविधाले नेपाली व्यापारीलाई यहाँसम्म सामान ल्याउन जोखिम घट्नुका साथै अन्य धेरै समस्या हटाएको छ,’ नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले नागरिकसँग भने। लामो समयदेखि व्यापारमा सहजीकरण गर्दै आएको नेपाल फ्रेटफरवार्डर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्माले पनि नेपाली व्यवसायीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या यो सहमतिले हटाएको बताए।
महानिर्देशक पौडेलका अनुसार वार्तामा भन्सार नाका सातै दिन खुला गर्न पनि भारत सहमत भएको छ। अहिले भारतीय भन्सार नाका सातामा २ दिन बन्द हुने गरेका छन्। यसले आयात र निर्यात गर्ने सामानसहितका ट्रक भन्सार नाकामा रोकिने समस्या हुँदै आएको थियो। यो समस्याले पनि लागत र समय दुवै बढेको थियो।